हिन्दू राज्य नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो : सभापति देउवा « हाम्रो ईकोनोमी
हिन्दू राज्य नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब ‘हिन्दू’ राज्यको विषयमा बहस हुने भएको छ । प्रशिक्षण र जागरण कार्यक्रमका दौरान यहि विषयमा समस्या आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयमा लचिलो बनेका हुन् ।
यसको प्रमाण उनले सुनसरी जाने क्रममा विमानस्थलमा दिए । भने,‘हिन्दू राज्यका विषयमा कुराकानी हुन्छ । यस विषयमा छलफल चल्नपर्छ ।’
हिन्दू राज्यको विषयलाई एजेन्डा बनाउन नहुने अडानमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छादार, नेता कृष्ण सिटौलालगायत छन् । बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू भने हिन्दूत्वको मुद्दा कांग्रेसको एजेन्डा बन्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
तर नेता मात्र नभएर देशैभरको प्रशिक्षणका क्रममा कांग्रेसका कार्यकर्ता तहले पनि हिन्दूत्वको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाई अघि सर्नुपर्ने बताएपछि सभापति देउवा सकारात्मक देखिएका हुन् ।
सोही सुझावका आधारमा नै उनले अब कांग्रेसमा हिन्दूको एजेन्डामाथि छलफल हुने बताएका हुन् । यसलाई पार्टीको आधिकारीक एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेचाहिँ निर्णयका आधारमा नै हुने उनको संकेत थियो ।
‘पार्टीभित्र लामो समयदेखि यस विषयमा गम्भिर बहस भइरहेको छ । यसलाई एजेन्डा बनाउन सभापति सकारात्मक हुनुहुन्छ’, देउवानिकट नेता भन्छन्,‘नेताले मात्र होइन, कार्यकर्ताले पनि यस धारणालाई कायम राख्न बारम्बार दबाब दिएका छन् ।’
महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला दिलेन्द्रप्रसाद बडु, दिलबहादुर घर्ती र दीपक गिरी हिन्दूत्वको वकालतमा छन् । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद समेत हिन्दू राज्यको पक्षमा छन् ।
यसअघि काठमाडौंमा भएको महासमितिको बैठकमा नै हिन्दूलाई एजेन्डा बनाउनका लागि प्रस्ताव मात्र होइन हस्ताक्षर नै शंकलन गरिएको थियो । जसको नेतृत्व नेता शंकर भण्डारीले गरेका थिए । तर महासमितिमा उक्त एजेन्डालाई बृहत छलफलमा लगिएन, जुनबेला भारतको आम निर्वाचनको अवस्था थियो ।
अहिले बहुमतका साथ भारतीय संस्थापन भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि कांग्रेसमा फेरि हिन्दूत्वको बहस बलियो भएको छ । खासगरी अघिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरसँगको भेटपछि सभापति देउवाको पनि धारणा परिवर्तन भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।